Ukuthobela | Law & More | I-Eindhoven kunye neAmsterdam
Kuluntu lwanamhlanje, ukubaluleka kokuthobela kuye kwabaluleka ngakumbi. Ukuthobela kuthathwe kwisenzi sesiNgesi 'ukuthobela' kwaye kuthetha 'ukuthobela okanye ukuthobela'. Ukusuka kwimbono yomthetho, ukuthobela kuthetha ukuthobela imithetho efanelekileyo kunye nemigaqo. Oku kubaluleke kakhulu kuyo yonke inkampani neziko. Ukuba imithetho nemigaqo esebenzayo ayithobelwanga, amanyathelo angabekwa ngurhulumente.
NGABE UFUNA UMTHETHO WOKUXELWA?
> Umthetho wabucala
> iinkonzo zethu
Kuluntu lwanamhlanje, ukubaluleka kokuthobela kuye kwabaluleka ngakumbi. Ukuthobela kuthathwe kwisenzi sesiNgesi 'ukuthobela' kwaye kuthetha 'ukuthobela okanye ukuthobela'. Ukusuka kwimbono yomthetho, ukuthobela kuthetha ukuthobela imithetho efanelekileyo kunye nemigaqo. Oku kubaluleke kakhulu kuyo yonke inkampani neziko. Ukuba imithetho nemigaqo esebenzayo ayithobelwanga, amanyathelo angabekwa ngurhulumente. Oku kwahluka kwintlawulo yolawulo okanye intlawulo yokohlwaywa ekuchithweni kwelayisensi okanye ukuqaliswa kophando lolwaphulo-mthetho. Nangona ukuthobela kunokuhambelana nayo yonke imithetho ekhoyo kunye nemigaqo, kule minyaka idlulileyo ukuthobela kudlale indima enkulu kumthetho wezemali nakwimfihlo yabucala.
Ukuthotyelwa kwemithetho yabucala kuye kwabaluleka ngakumbi kule minyaka idlulileyo. Oku kubangelwa ikakhulu nguMgaqo woKhuseleko lweDatha ngokubanzi (GDPR), oqale ukusebenza nge-25 Meyi 2018. Ukusukela lo mmiselo, amaziko kufuneka athobele imithetho engqongqo kwaye abemi banamalungelo amaninzi ngokubhekisele kwidatha yabo. Ngamafutshane, i-GDPR isebenza xa idatha yobuqu isenziwa ngumbutho.
Idatha yobuqu ibhekisa kulo naluphi na ulwazi olunxulumene nomntu ochongiweyo okanye olichazwayo. Oku kuthetha ukuba olu lwazi luhambelana ngqo nomntu okanye lunokutsalwa ngqo kuloo mntu. Phantse yonke imibutho kufuneka ijongane nokulungiswa kwedatha yobuqu. Le sele inje imeko, umzekelo, xa kusetyenzwa ngolawulo lwemirhumo okanye xa kugcinwa idatha yabathengi. Kungenxa yokuba ukuqhutywa kwedatha yobuqu ichaphazela bobabini abathengi kunye nabasebenzi benkampani. Kwakhona, uxanduva lokuthobela i-GDPR lusebenza kwiinkampani nakwimibutho yezentlalontle efana neeklabhu zezemidlalo okanye iziseko.
Ubungakanani be-GDPR bufikelelwa ngokude kakhulu. IGunya leDatha yoLuntu ngumbutho ojongileyo malunga nokuthotyelwa kwe-GDPR. Ukuba umbutho awuthobeli, uGunyaziwe weDatha yoBuntu unokumisela izohlwayo, phakathi kwezinye izinto. Ezi ntlawulo zinokubaleka amawaka amawaka euros. Ukuthotyelwa kwe-GDPR ke kubalulekile kuyo yonke intlangano.
Iqela le Law & More Iqinisekisa ukuba uyangqinelana nayo yonke imithetho nemigaqo. Iingcali zethu zigxila kwimibutho yakho, zivavanye ukuba yeyiphi na imigaqo nemigaqo esebenza kwisebe lakho kwaye ke zoba nesicwangciso sokuqinisekisa ukuba uyithobela le mithetho kuwo onke amabala. Ukongeza, iingcali zethu zinokusebenza njengabaphathi bokuthobela kwakho. Ayisiyomfuneko kuphela yokuqinisekisa ukuba uyithobela imigaqo efanelekileyo kunye nemigaqo, kubalulekile ukuba uqhubeke nokuthobela ngokukhawuleza imithetho nemigaqo eguqukayo. Law & More ngokulandela konke okwenzekayo kwaye uphendula kubo kwangoko. Ngenxa yoko, sinokuqinisekisa ukuba umbutho wakho ukho kwaye uya kuhlala uthobelana kwixesha elizayo.
Mr. UTom Meevis, igqwetha kwa Law & More – tom.meevis@lawandmore.nl